Introvert တွေက Extrovert တွေကို မလုပ်စေချင်တဲ့ အပြုအမူများ
Introvert တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီအချက်တွေကိုမလုပ်ဖို့ Extrovert တွေကိုပြောချင်ပါတယ်
26 Jun 2019 . 3:29 PM
လူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေ ၊ ခံယူချက်တွေနဲ့ ယုံကြည်မှုတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်က ဒီလိုဖြစ်လို့ တခြားသူကလည်း ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အပြုအမူတွေ အပြောအဆိုတွေက အရမ်းကိုမှားယွင်းပါတယ်။ ဒီခေတ်ကြီးမှာဆိုရင် လူတွေကပိုပြီးတက်ကြွလာကြတယ် ၊ ပွင့်လင်းလာကြတယ် ၊ ပိုပြီးနိုးကြားလာကြတယ်။ Active ဖြစ်ပြီး Social ကောင်းတဲ့သူတွေ အခွင့်အလမ်းအများကြီးပိုရတဲ့ ခေတ်ကြီးဖြစ်လာတာနဲ့ Introvert တွေအပေါ်မှာ မသိလိုက်ပဲနဲ့ ဖိအားပေးနေမိတာတွေရှိပါတယ်။ Introvert တွေရဲ့ Nature ကိုက အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ပြီး ၊ Isolated (တသီးတသန့်) ဖြစ်တာကို သဘောကျတာပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေက ဒီလူမှုဝန်းကျင်မှာ ဝင်ဆံ့အောင်နေနိုင်ဖို့တောင် မနည်းကြိုးစားနေရတာပါ။ ဒါကြောင့်တချို့သူတွေကနေ Introvert တွေကို ဖြစ်စေချင်တဲ့အချက်တွေဟာ သူတို့အတွက်တော့ ခက်ခဲနေတာတွေ ၊ မဖြစ်နိုင်တာတွေ ၊ စိတ်ဆင်းရဲရတာတွေရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ Extrovert သူငယ်ချင်းက ကိုယ့်ကိုပါတီပွဲတစ်ခုကိုခေါ်သွားပြီး ဟိုလည်းရောက်ရော သူကကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်သွားတယ်။ ကိုယ့်ကိုသူစိမ်းတွေကြားမှာ ထားခဲ့တယ်။ Extrovert တွေအတွက်တော့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ကို နှုတ်ဆက်ပြီးစကားတွေပြော မိတ်ဆွေဖွဲ့လိုက်တာက လွယ်ကူနိုင်ပေမယ့် Introvert တွေအတွက်က အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေ။ အဲဒီလိုလူတွေအများကြီးနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရတာကို မကြိုက်တာကြောင့် Introvert ဖြစ်နေတာပါဆို အခုလိုပါတီပွဲတွေ ၊ လူများတဲ့နေရာတွေကို ခေါ်လည်းခေါ်သွားတယ် ၊ ဂရုလည်းမစိုက်ဘဲပစ်ထားခဲ့တာက Introvert တွေအတွက် အရမ်းကိုစိတ်ဆိုးချင်စရာကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Extrovert ဖြစ်တဲ့သူတွေက Active ဖြစ်ပြီး အမြဲလိုလိုတက်ကြွနေတာကို နားလည်ပါတယ်။ သူတို့တွေက စကားပြောလည်းအရမ်းကောင်းတယ် ၊ လူမှုရေးလည်းအရမ်းကောင်းတယ်။ တော်တော်များများကို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ပျော်ပျော်လည်းနေတတ်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ Extrovert တွေစကားပြောတာသဘောကျသလို Introvert တွေကလည်း နားညည်းတာကိုမကြိုက်ကြဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်သူငယ်ချင်း Extrovert က စကားတွေအားရပါးရပြောပြီး အသံကတဖြည်းဖြည်းကျယ်လာတဲ့အခါမှာ မခံစားနိုင်တော့လို့ နည်းနည်းလေးအသံလျော့ပြောပေးပါလားလို့ တောင်းဆိုမိတဲ့အခါတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ဆိုရင် သူတို့ကိုနားမလည်ပေးသလို ၊ ကိုယ်ကပဲမှားနေသလိုလိုအကြည့်မျိုးနဲ့ ကြည့်တာကိုခံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုပြောတာက တမင်တကာ ပါးစပ်ပိတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ Introvert တွေဘက်ကနေလည်း နားလည်စေချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
Introvert တစ်ယောက်က စကားစပြောလာတာနဲ့ Miracle ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်ပျက်နေတာ
ဟုတ်ပါတယ်။ Introvert ဖြစ်နေလို့ စကားနည်းတယ် ၊ တော်ရုံတန်ရုံစကားမပြောဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လိုအပ်လာလို့ စကားပြောတဲ့အခါ။ Oh My God! သူစကားပြောတတ်တယ်တော့။ နောက်ဆုံးတော့ နင်စကားပြောပြီနော်။ ဟဲ့ (Name) စကားပြောနေပြီ ၊ ဒီနေ့တော့မိုးရွာတော့မယ်ထင်တယ်ဆိုပြီး ပြောတာတွေက Introvert ဖြစ်တဲ့သူအတွက် စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စေပါတယ်။
Introvert ဖြစ်တာနဲ့ပဲ အရာရာကိုငြင်းဆန်တော့မယ်ထင်တာ
Introvert တွေရဲ့သဘာဝအတိုင်း အမြဲလိုလိုတစ်ယောက်တည်းနေတတ်တာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုနေနေတာနဲ့ပဲ သူငယ်ချင်းတွေတွေ့တဲ့အခါ ၊ မွေးနေ့ပွဲတွေလုပ်တဲ့အခါ ၊ အပြင်သွားရုပ်ရှင်တွေဘာတွေကြည့်တဲ့အခါကျရင် “သူကခေါ်ရင်လည်းလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေ”လို့တွေးလိုက်ပြီး ဘယ်ဆိုဘယ်မှမခေါ်တော့တာ ၊ ဘာပွဲကိုမှမဖိတ်တော့တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ အနည်းဆုံးမေးကြည့်လိုက်လို့လည်း အပန်းကြီးတာမှမဟုတ်တာ။ တစ်ယောက်တည်းနေရတာကို ကြိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောရတာကို လုံးဝသဘောမကျဘူးလို့ မဆိုလိုဘူးလေ။
Introvert တွေကို Social ကျဖို့ အတင်းတိုက်တွန်းနေတာ
သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းမို့လို့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကို ကောင်စေချင်လို့ ၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတစ်သက်လုံးတစ်ယောက်လည်းနေပြီး သေသွားမှာစိုးလို့ စေတနာနဲ့ Social ကျကျနေအောင် တွန်းအားပေးတာ ၊ တိုက်တွန်းတာတွေကိုမကောင်းဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Introvert တွေအနေနဲ့ Extrovert သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြချင်တာက “သူတို့တွေ Social ကျကျနေချင်လာတဲ့တစ်နေ့ဆိုတာ အနာဂတ်မှာရှိလာမှာပါ။ ဒီနေ့မဟုတ်ရင်တောင် မနက်ဖြန်တွေ ၊ သဘက်ခါတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဒီကမ္ဘာမှာနှစ်တွေအများကြီးနေရဦးမှာပါ။ ဒါကြောင့် Introvert ဖြစ်တဲ့ကိုယ်တွေ Social ကျဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာ အတင်းကြီးမတိုက်တွန်းပါနဲ့” လို့ပါ။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ သူ့ဘာသာသူဖြစ်သွားမှာမို့လို့ အရမ်းကြီးလည်း မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဆိုတာပါ။ ဘယ်သူမှတစ်သက်လုံးတစ်ယောက်တည်းနေသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အပျိုကြီး ၊ လူပျိုကြီးဖြစ်သွားရင်တောင် ကြောင်တွေခွေးတွေမွေးပြီးနေလို့ရတာမို့ အထီးကျန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သိပ်မစိုးရိမ်ဘဲနဲ့ အချိန်နည်းနည်းပေးပြီး စောင့်ပေးပါလို့ ပြောချင်တာပါ။
အိမ်း….ပြောချင်တာကတော့ ဒါအကုန်ပါပဲ။ Extrovert ဖြစ်ဖြစ် Introvert ဖြစ်ဖြစ် အချင်းချင်း နားလည်မှုတွေနဲ့ အပြန်အလှန်တန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ရှင်သန်ချင်ကြတာပဲလေ။ ဒါကြောင့် အခုပြောတာတွေကိုလည်း ဝေဖန်တယ် ၊ စောဒကတက်တယ်လို့မမြင်ဘဲနဲ့ ဒီအတိုင်းခံစားချက်လေးကို ထုတ်ပြောတယ်လို့ပဲ သဘောထားစေချင်ပါတယ်။